Bit By Bit - okwu mmalite
N'ihi m, akwụkwọ a malitere na 2005, mgbe m na-arụ ọrụ na m dissertation. M na-agba ọsọ ihe online nnwale, nke m agwa gị ihe niile banyere n'Isi nke 4, ma ugbu a, m na-aga-agwa gị ihe na-abụghị nke ọ bụla agụmakwụkwọ akwụkwọ. Na, ọ bụ ihe ahụ fundamentally gbanwere otú m na-eche banyere nnyocha. Otu ụtụtụ, mgbe m nyochara web-server, m chọpụtara na n'otu ntabi anya dị ka 100 ndị mmadụ si Brazil keere òkè ná m nnwale. Ahụmahụ a nwere mmetụta dị ukwuu m n'ahụ. N'oge ahụ, m nwere enyi bụ ndị na-agba ọsọ omenala lab nwere, na m maara otú ike ha nwere na-arụ ọrụ na-n'oru, na-elekọta, na-akwụ ndị na-ekere òkè na ha nwere; ma ọ bụrụ na ha nwere ike na-agba ọsọ mmadụ 10 na otu ụbọchị, nke ahụ bụ ezigbo ọganihu. Ma, m online nnwale, 100 mmadụ abuana ka m nọ na-ehi ụra. -Eme gị nnyocha mgbe ị na-ehi ụra wee dara gị bụ eziokwu, ma ọ bụghị. Mgbanwe technology-kpọmkwem oge mgbanwe site na analọg afọ na dijitalụ afọ-nke pụtara na anyị nwere ike ugbu anakọta ma nyochaa elekọta mmadụ data na ọhụrụ ụzọ. Akwụkwọ a bụ banyere-eme elekọta mmadụ nnyocha ọhụrụ ndị a ụzọ.
Akwụkwọ a bụ maka abụọ dị iche iche na obodo. Ọ bụ na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na-achọ ime ihe data sayensị, na ọ bụ maka data ọkà mmụta sayensị na-achọ ime ihe na-elekọta mmadụ na sayensị. M na-ewepụta oge na ma nke ndị a obodo, na akwụkwọ a bụ m inwale mee echiche ha ọnụ n'ụzọ na-ezere quirks na jargon nke ma. Nyere obodo na akwụkwọ a bụ n'ihi na, ọ ga-aga enweghị na-ekwu na akwụkwọ a abụghị nanị maka ụmụ akwụkwọ na ndị ọkachamara. M na-arụ ọrụ ụfọdụ dị na ochichi (na US Census Bureau) na na tech ụlọ ọrụ (na Microsoft Research), na m maara na e nwere ọtụtụ nke na-akpali akpali nnyocha na-eme n'èzí nke mahadum. Ya mere, ọ bụrụ na ị chee echiche banyere ihe ị na-eme ka mmadụ nnyocha, mgbe ahụ akwụkwọ a bụ maka gị, n'agbanyeghị ebe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ihe ụdị usoro ị ugbu a na-eji.
Anyị ka bụ ndị na mmalite ụbọchị nke na-elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ afọ, m na hụrụ ụfọdụ nghọtahie ndị dị nnọọ mkpa na-emekarị nke na ọ na-eme ihe ndị kasị uche m ilebara ha n'ebe a, n'okwu mmalite. Si data ndị ọkà mmụta sayensị, m na hụrụ abụọ nghotahie. The mbụ na-eche na ihe data na-akpaghị aka solves nsogbu. Ma, na-elekọta mmadụ nnyocha na bụghị m ahụmahụ. N'ezie, na-elekọta mmadụ nnyocha ọhụrụ ụdị nke data, dị ka megide ihe nke otu data, o yiri ka ọtụtụ na-enye aka. Nke abụọ nghọtahie na m na hụrụ si data ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na-elekọta mmadụ na sayensị bụ nnọọ a ụyọkọ fancy-okwu ọbọp gburugburu nkịtị uche. N'ezie, dị ka a na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị-Enyere dị ka ọkà ná mmekọrịta-m na-ekwekọrịtaghị na na; Echere m na-elekọta mmadụ na sayensị nwere otutu-enye. Smart ndị na-arụ ọrụ ike ịghọta àgwà ụmụ mmadụ ruo ogologo oge, na o yiri ihe nzuzu ileghara amamihe na-akwakọba site na nke a mgbalị. My olileanya na akwụkwọ a ga-enye gị ụfọdụ n'ime na amamihe na n'ụzọ na-adị mfe nghọta.
Na-elekọta mmadụ ndị ọkà mmụta sayensị, m na-ahụkwa abụọ nghotahie. Akpa, m na hụrụ ụfọdụ ndị dee na-apụ dum echiche nke na-elekọta mmadụ nnyocha na iji ngwá ọrụ nke dijitalụ afọ dabere na a ole na ole ọjọọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ a, i nwere eleghị anya ugbua na-agụ a ụyọkọ akwụkwọ nke na-eji na-elekọta mmadụ media data n'ụzọ banal ma ọ bụ na-ezighị ezi (ma ọ bụ ma). M nwere oke. Otú ọ dị, ọ ga-abụ a dị oké njọ ihie ụzọ bụ ikwubi site n'ihe atụ ndị a na ihe niile digital afọ elekọta mmadụ research ọjọọ. N'ezie, na eleghị anya, na-agụkwa a ụyọkọ akwụkwọ na-eji nnyocha e mere data n'ụzọ banal ma ọ bụ na-ezighị ezi, ma ị dịghị ide-apụ niile research eji nyocha. Nke ahụ bụ n'ihi na unu maara na e nwere oké nnyocha mere na nnyocha e mere data, na n'akwụkwọ a, m na-aga na-egosi gị na e nwekwara oké nnyocha mere na ngwaọrụ nke dijitalụ afọ.
Nke abụọ nkịtị nghọtahie na m na hụrụ na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị bụ na-emegharị ahụ na-adị n'ebe n'ọdịnihu. Mgbe adabere na ya kpebie-elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ ebighi-nnyocha na m na-aga na-akọwa n'akwụkwọ a-ọ dị mkpa ịjụ abụọ dị iche ajụjụ:
Olee otú nke a style nke nnyocha ọrụ ugbu a?
Lee otú nke a ga-style nke nnyocha ọrụ na-eme n'ọdịnihu dị ka data odida obodo mgbanwe na dị ka na-eme nnyocha itinyekwu uche nsogbu ndị a?
Ọ bụ ezie na-eme nnyocha na-azụ iji zaa ajụjụ nke mbụ ahụ, n'ihi na nke akwụkwọ a, m na-eche nke abụọ ajụjụ dị mkpa. Ya bụ, ọ bụ ezie na-elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ afọ adịghị ma emepụta oke, paradigm-agbanwe ọgụgụ isi onyinye, ọnụego nke mma nke dijitalụ afọ research bụ incredibly ngwa ngwa. Ọ bụ nke a ọnụego nke mgbanwe, ihe karịrị nke ugbu a larịị, na-eme ka dijitalụ afọ research-at ogbu m.
Ọ bụ ezie na na ikpeazụ paragraf nke yiri ka na-enye gị nwere àkù na ụfọdụ unspecified oge na-eme n'ọdịnihu, ihe mgbaru ọsọ m na akwụkwọ a bụ na-ere gị on ọ bụla ụdị nyocha. M na-eme ọ bụghị onwe onwe mbak ke Twitter, Facebook, Google, Microsoft, Apple ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ tech ụlọ ọrụ (ọ bụ ezie na, n'ihi zuru ngosi, m na-arụ ọrụ na ma ọ bụ natara research ego site n'aka Microsoft, Google, na Facebook). Ọ bụrụ na unu nwere obi ụtọ na nnyocha na ị na-ama na-eme: nnukwu, na-eme ihe ị na-eme. Ma, ọ bụrụ na ị nwere echiche na dijitalụ afọ pụtara na ọhụrụ dị iche iche ihe nile kwere omume, mgbe ahụ, m ga-amasị-egosi gị ndị na ohere. N'ihi ya, n'oge nile nke akwụkwọ mgbaru ọsọ m bụ ịnọgide na a credible narrator, na-agwa gị banyere nile akpali akpali ọhụrụ stof na o kwere omume, mgbe duzie gị pụọ ole na ole ọnyà na m na hụrụ ndị ọzọ ịdaba. M olileanya na a ga-enyere gị ka mma nnyocha na-enyere gị aka ịtụle nnyocha nke ndị ọzọ.
Dị ka ị pụrụ chọpụtara ama, ụda olu nke akwụkwọ a bụ a bit dị iche iche site na ụfọdụ ndị ọzọ agụmakwụkwọ akwụkwọ. Nke ahụ bụ kpachaara anya. Akwụkwọ a pụta si a gụsịrị akwụkwọ nzukọ ọmụmụ na akụziworo m na Princeton ke Ngalaba Sociology, m ga-amasị akwụkwọ a weghara ụfọdụ n'ime ihe ike na obi ụtọ site na nzukọ ọmụmụ. Karịsịa, m chọrọ akwụkwọ a nwere atọ e ji mara:-enye aka, nchekwube, na-eme n'ọdịnihu na-edebere.
-Enye aka: My mgbaru ọsọ bụ dee a akwụkwọ na-enye aka n'ihi na ị. Ya mere, m na-aga ide na-emeghe ma na n'ịgba style. Nke ahụ bụ n'ihi na ihe kasị mkpa na m na-ezitere bụ otu ụzọ iche echiche banyere ọha nnyocha. Na, m ahụmahụ si ezi ihe na-egosi na ụzọ kasị mma iji gwa ihe a echiche bụ ozi na na nza nke ihe atụ.
Nchekwube: The abụọ obodo na akwụkwọ a na-eme-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na data ọkà mmụta sayensị-enwe nnọọ ụdị dị iche iche. Data ọkà mmụta sayensị bụ n'ozuzu obi ụtọ; ha na-ahụ na iko dị ka ọkara zuru. Social ndị ọkà mmụta sayensị, na aka nke ọzọ, bụ n'ozuzu ọzọ dị oké egwu; ha na-ahụ na iko dị ka ọkara efu. N'ime akwụkwọ a, m na-aga iji usoro nchekwube ụda a data ọkà mmụta sayensị, ọ bụ ezie na ọzụzụ m dị ka a na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị. Ya mere, mgbe m na-ewetara ihe atụ, m na-aga-agwa gị ihe m hụrụ n'anya banyere ihe atụ ndị a. Na, mgbe m na-eme tụọ nsogbu na ihe atụ-na m ga-eme n'ihi na ọ dịghị nnyocha zuru okè-I'm aga na-agbalị na-ekwu nsogbu ndị a na a ụzọ bụ nti na nchekwube. M na ọ bụghị-aga na-dị oké egwu, n'ihi ịbụ oké egwu. M na-aga na-akatọ nke mere na m nwere ike inyere gị ike na ihe mara mma nnyocha.
Future na-abara: M olileanya na akwụkwọ a ga-enyere gị na-eme na-elekọta mmadụ nnyocha iji dijitalụ usoro ndị e nwere taa na dijitalụ usoro a ga-kere na-eme n'ọdịnihu. M malitere eme nke a ụdị nnyocha na 2003, ọ bụkwa mgbe ahụ ka m na hụrụ ọtụtụ mgbanwe. M na-echeta na mgbe m nọ na akwụkwọ ndị ahụ nwere nnọọ obi ụtọ banyere iji myspace na-elekọta mmadụ nnyocha. Na, mgbe m kụziiri m nke mbụ na klas na ihe m kpọrọ "web-dabeere-elekọta mmadụ nnyocha," ndị mmadụ nọ nnọọ obi ụtọ banyere kọmputa ndị dị otú ahụ dị ka SecondLife. M n'aka na n'ọdịnihu ukwuu n'ihe ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere taa ga-iyi-enweghị isi na na bụzi ihe mgbe ochie. Nke atọ na-anọ mkpa na ihu nke a mgbanwe dị ngwa bụ abstraction. Ya mere, nke a na-agaghị abụ a n'akwụkwọ na-akụzi na i kpọmkwem otú e si eji Twitter API; kama, ọ na-aga na-a akwụkwọ na-akụzi gị otú ị na-amụta site dijitalụ metụtara (Isi nke 2). Nke a na-adịghị ga-abụ a n'akwụkwọ na-enye gị nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka na-agba ọsọ nwere na Amazon Mechanical Turk; kama, ọ na-aga na-akụziri gị otú chepụta ma kọwaa ihe nwere na-adabere na dijitalụ afọ akụrụngwa (Chapter 4). Site n'iji abstraction, M anya na a ga-enwe a enweghi mgbe n'akwụkwọ on a-adọ isiokwu.
Echere m na nke a bụ ihe ndị kasị akpali akpali oge mgbe na-a-elekọta mmadụ na-eme nchọpụta, na m na-aga-agbalị ime ka obi ụtọ n'ụzọ na-bụ kpọmkwem. Ya bụ, na ọ bụ oge ime n'ofè-edochaghị anya n'ozuzu banyere kpokọtara ike nke ọhụrụ data. Ọ bụ oge iji nweta kpọmkwem.